toubab ဟူသောစကားလုံး၏ရင်းမြစ် - AFRIKHEPRI
စကားလုံး toubab ၏မူလအစ
တရုတ်ပိရမစ်၏နက်နဲသောအရာ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (2016)
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင် 6, 2020
Toubab (Wolof tubaap, tubaab, toubabe, toubabou, tuab, tubab) သည်အနောက်အာဖရိကတွင်အသုံးပြုသောစကားလုံးဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆီနီဂေါ၊ မော်ရီတေးနီးယား၊ ဂမ်ဘီယာနှင့်မာလီ၊ မည်သည့်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါစေ Berber Arabo မှအပလူဖြူအသားအရေရှိသောမည်သူ့ကိုမဆိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ဥရောပသားများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒါဟာအာရဗီစကားလုံးတစ်ခုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်ပါသည် tabib '' (ဆရာဝန်ဆိုလိုတာ) အထက်တွင်ကိုးကား။ ကိုလိုနီခေတ်တွင်ပထမဆုံးသာသနာပြုများသည်ဥရောပမှလူဖြူများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်းလဲရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဝေါလ်ဝေါ့ဖ် (verb) ကြိယာဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တစ် ဦး ကပုံပျက် နှစ်ခု Bob နှစ်ခုဒေနောရိ, ဗြိတိန်တွင်အသုံးပြုမယ့်ငွေကြေးအဓိပ်ပာယျ။
နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်သမုဒ္ဒရာမှဆိုလိုသည်၊ ပထမဥရောပသားများရောက်ရှိခြင်းပုံစံကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောမူရင်းမှာဝူဖေါ့ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် - ဥရောပဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည် Tougal ။ ဝူဝေါဖ်သည်ထပ်တူထပ်မျှလူများ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်တူဘဘဘကအပြောင်းအလဲ၏လူများကိုဆိုလိုသည်။
SOURCE မှ: http://www.savoiretpartage.com/2012/04/30/lorigine-du-mot-toubab/
Afrikhepri ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - လှူဒါန်း
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur မာစတာဘဝ၏ကလေးဘဝ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၈)"အနာဂတ်ဝိညာဏသခင်၏ထူးခြားသောခရီး - ကြည့်ရှုရန်လှပသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်!" ဇူလိုင်လ 6, 01:32
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur မျိုးစေ့စစ်ပွဲ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၆)"ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅ နှစ်အတွင်း Transgene အပင်များမှ GM အစာကိုသာရရှိပါမည်။" ဇူလိုင်လ 6, 01:27
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur ညီမျှခြင်း2ကိုကြည့်ပါ (2018)"ကြည့်ဖို့ကောင်းသောရုပ်ရှင်!" ဇူလိုင်လ 6, 01:21